घरवाली, परदेशवाली र नत्थीवाली – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७० फाल्गुन १०, शनिबार ०३:१० गते
भ्यालेन्टाइन डे पनि हामीबाट भर्खरै बिदा भएको छ । तर, त्यस दिवसका केही अविस्मरणीय सन्दर्भहरु अझै पनि बाँकी छन् । म यसपटक मेरा अनन्य पाठकहरुलाई मेरो ओरजिनल भ्यालेन्टाइन्सबारे चर्चा गर्न चाहन्छु । यो प्रेमको दिवसका बारेमा मैले कति नै बुझ्न सकेको हुँला र ? मैले गर्ने तीतामीठा अनुभूति मात्रै हो । अहिलेसम्म पनि प्रेमको सर्वमान्य परिभाषा दिन प्रेमविद्हरु समेत असमर्थ छन् । प्रेमका विषयमा मेरा पाठकहरुलाई रोचक कुराहरु बताउने मेरो रहरमात्र हो । म त प्रेमी हूँ सबैको, भ्यालेन्टाइनजस्तै । भ्यालेन्टाइन कसैको हुन सकेन, सबैको भयो । यस्तै, म पनि सबैको भएको छु र सबै सधैँ मेरा भइरहून्…।
यो वर्ष मैले तीन जना भिन्न पात्रसँग भ्यालेन्टाइन मनाएको छु । अन्यथा मान्नुहुन्न भने म मेरो ‘भ्यालेन्टाइन्स डिस्कोर्स’बारे तपाईंहरुमा शेयर गर्न चाहन्छु । यी तीनै जना पात्रहरुसँग मेरो सम्बन्ध फरक–फरक छ । र, मैले फरक ढंगबाटै यिनीहरुसँग भ्यालेन्टाइन मनाएको हुँ । हुन त, यस्ता भ्यालेन्टाइन्स डे हामीले सधैँ मनाए पनि हुन्छ । हाम्रा हरेक दिनहरु प्रेमदिवसभन्दा पनि रमणीय र स्मरणीय बन्न पनि सक्छन् । मनाउने एउटा बहाना चाहिएको मात्र हो । मैले यसपालि घरवाली, परदेशवाली र नत्थीवालीसँग प्रेमदिवस मनाएको छु । यो प्रेमले व्यक्तिअनुसार र बुझाइअनुसार छुट्टै मह¤व राख्दोरहेछ । प्रख्यात गीत छ नि, ‘फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार…।’ हो यस्तै, यही गीतको भावजस्तै ।
नसोचेका कति कुरा मान्छेले जीवनमा भोग्नुपर्छ । नचाहेका मान्छेसँग संगत गर्नुपर्छ । सोच्दै नसोचेका झमेला पनि बेहोर्नुपर्छ । आखिर जीवनमा सबै चाहेकै मात्र पुग्ने हो भने जीवनको यति धेरै मह¤व नै हुने थिएन । यो जीवन र जगत्का बारेमा कसैले पनि लेखेर र पढेर भ्याउँदैन । जे लेखे पनि मान्छेले औसत आफ्नै बारेमा लेख्ने हो र जे देखे पनि आफ्नै आँखाले देख्ने हो । भ्यालेन्टाइन्स डेको चर्चा गाउँसहर जताततै चलिरहेकै थियो । यो युगौँसम्म चलिरहने छ । एक दिन गन्तव्यमा पुग्न हतार गर्दै थिएँ । सपनामा जसरी अपरिचित नम्बरबाट अपरिचित व्यक्तिको फोन आयो । औसत परिचितका भन्दा अपरिचितका फोन आइरहन्छन् । रङ नम्बरका विषयमा छुट्टै चर्चा गरौँला । अहिले नयाँ फोन–संवादमा नै लागौँ । आफ्ना बारेमा वृत्तान्त बताएपछि उसले पनि आफ्नो परिचय दिई । उसकोे नाम सुन्नासाथ म झसङ्गै भएँ । मानौँ, एक्कासि ६ रेक्टर–स्केलको भुइँचालो आयो । भुइँचालोले मेरो शरीरका अवयवहरुमा कुनै विनाश गरेन । तर, विस्मृत भइसकेको घटनालाई स्मृतिमा ल्याइदियो । संयोगवश उसको नाम र थरसँग हुबहु भूतपूर्व गर्लफ्रेन्डको नाम मिल्न गएकोे थियो । कताकता मुटुको कुनै कुनामा च्वास्स दुखेजस्तो भयो । पीडादायीचाहिँ होइन ।
केही दिनको फोनवार्तापछि पूर्वनिर्धारित समयमा भेटवार्ता जु¥यो । त्यो उसैको चाहनाबमोजिम जुरेको हो । म झनै अचम्मित भएँ । जीउडाल, हाउभाउ, बोल्ने शैली र पहिरनसमेत दुरूस्तै मिलेको थियो । म एकछिन त ट्वाल्ल परेर हेरिरहेँँ । भूतपूर्वकै प्रतिबिम्ब हो वा मिथक, मैले छुट्याउनै सकिनँ । मानौँ, ऊ उसकै बिम्ब बोकेकी श्यामश्वेत तस्बिर थिई । ऊ नत्थीवाली थिई । मेरी भूतपूर्व प्रेमिका पनि नत्थीवाली नै थिई । एकमात्र होइन, अनेकानेक विशेषणको समानताका कारण म एकोहोरिएको थिएँ ।
म नत्थीवालीसँग नयाँ सम्बन्ध विस्तार गर्न पुगेको थिएँ । एकअर्कामा परिचय साटेपछि ऊ मेरो वर्तमानकी नयाँ प्रेमिका भएकी थिई । संयोगले जुरेको नयाँ सम्बन्धलाई नयाँ ढंगबाटै अघि बढाउने मेरो चाहना बनेको थियो । तर, यो नयाँ सम्बन्ध हाम्रा लागि वैधानिकचाहिँ थिएन । कारण, मैले घरजम गरिसकेको थिएँ । ऊ अविवाहित नै थिई । एउटा विवाहित पुरूष र अविवाहित महिलाबीच कस्तो सम्बन्ध हुनसक्छ ? मित्रवत सम्बन्ध नै सही, के यो समाजका लागि मान्य हुनसक्छ ?
अब पालो नत्थीवालीको रह्यो । खासमा नत्थीवालीसँग भ्यालेन्टाइन मनाउनुको पनि एउटा कारण छ । नत्थीवाली मेरी शुभचिन्तक मात्र हुन् । तथापि, उनीसँग पनि अचम्मको प्रेम सम्बन्ध स्थापित भइसकेको छ । खासमा यही स्तम्भमार्फत नत्थीवालीसँग भेटघाट जुरेको हो । ‘बिहेपछि प्रेम गर्ने कोही छ ?’ शीर्षकको वियोगान्त प्रेमकथा पढेर उनी मेरी शुभचिन्तक बनेकी हुन् । उनले मैले सोधेको प्रश्नको च्यालेन्ज स्वीकार गरेकी थिइन् । एउटा असल पाठकका रुपमा उनले लेखकसँग भेट गर्ने इच्छा राखेकी थिइन् । तर, यो स्तम्भकार उनको सोचाइविपरीत भइदियो । कारण, मैले च्यालेन्ज फिर्ता लिनुप¥यो ।
म नत्थीवालीलाई भ्यालेन्टाइनमा के उपहार दिऊँ भनेर सोचिरहेको थिएँ । त्यसैबेला मेरो दिमागमा सुविन भट्टराईको चर्चित उपन्यास ‘समर लभ’ को याद आयो । किताबले पढ्ने संस्कृतिको विकास पनि गराउँछ र यो सम्बन्ध समर लभजस्तै भएकाले उपन्यास दिने निर्णय गरेको हुँ, जसमा प्रेमको प्रतीक फूल त छँदै थियो ।
शुभकामनासँगै मैले उही पुस्तक उपहार दिएँ । उसले सोधी– ‘म यो अहिल्यै खोल्न सक्छु ?’
‘खोल्नुस् न’, मैले उत्तर दिएँ ।
‘फूल त टिपेपछि मरिहाल्छ नि, तर मरे पनि यसले फूलको अस्तित्व राखेरै मर्छ’, मैले सोधेँेँ, ‘यो कुन फूल हो, तपाईं चिन्न सक्नुहुन्छ ?
ऊ, अर्थात् नत्थीवाली पानीमा रूझ्दै भेट्न आएकी थिई । झरीले प्रेम गर्ने हरेक जोडीहरुलाई त्यो पानीले बिजोग बनाइदिएको थियो । ऊ झरीमा रूझेर निथ्रुक्क भए पनि कुनै प्रभाव देखिएको थिएन । मेरो भनाइले उसलाई के लाग्यो कुन्नि ? ऊ पुनः मुस्कुराई । उसको आँखामा स्पष्टसँग ‘समर लभ’ देखा परेको थियो । यसअघि मैले बिहे गरेर प्रेम गर्ने उम्मेदवारको प्रसङ्ग उठाएको थिएँ । बिहे गरेकाहरुसँग प्रेम गर्नेे कुरा गरेको थिइनँ । तर, यहाँ त एउटा विवाहित युवकसँग कुनै अविवाहित युवतीको प्रेम भइरहेको थियो– ‘समर लभ’ । मैले घरवाली, परदेशवाली र नत्थीवालीसँग गर्ने प्रेम छुट्टाछुट्टै हो । त्यसो त, म प्रेम सबैलाई गर्छु । र, जीवनपर्यन्त गरिरहने नै छु । आउनुहोस्, प्रेमपूर्वक बाचौँ । प्रेममय बनाऔँ हरेक पलहरु र प्रेमिल बनिरहोस्, युयौँसम्म हरेकका प्रेमदिवसहरु…।